Afar Beelood oo maanta heshiis ku wada saxiixday Dhuusa Mareeb – Radio Muqdisho
Afar Beelood oo maanta heshiis ku wada saxiixday Dhuusa Mareeb
Shirka dib u heshiisiinta Beelaha wada dega gobolada Mudug iyo Galgaduud oo ka socda magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay heshiis ay wada gaaraan Afar Beelood oo kamid ah Beelaha shirka ka qeybgalayay iyagoo ku heshiiyay in wixii hadda ka dambeeyay si nabad iyo walaaltinimo ah ku wada noolaadaan.
Maxamed Nuur Diini oo kamid ah waxgaradka shirka ka qeybgalaya oo warbaahinta u akhriyay qodobadii ay ku heshiiyeen Beelahan ayaa yiri :
1.	In aysan wax Colaad ah hadda na dhex oolin.
2.	In wixii shakhsiyaad kala tabanayaan loo xil saaro odayaasha.
3.	labadan Beelood anagoo lamid ah waxaan diyaar u nahay in aan la heshiino dhamaan Beelaha.
Waxgaradka labada dhinac oo madasha ka hadlay ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay heshiiska ay maanta labo labo Beelood u wada gaaraan, waxaana dhankooda balan qaadeen in ay xoojinayaan nabad iyo deris wanaaga.
C/laahi Axmed Samatar oo ah Gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda iyo Amaanka ee maamulka gobolka Galgaduud oo goobta heshiiskan lagu soo bandhigay ka hadlay ayaa sheegay in ka maamulkaan ay aad ugu faraxsan yihiin heshiisyada ay maanta labo labo u gaareen Beelaha shirka dib u heshiisiinta ka qeybgalayay isagoo dhamaan Beelaha ku booriyay in heshiis wada qaataan.
Duqa degmada Beledweyne oo ganacsatada ka codsaday in ay bixiyaan canshuurta
Harriet Mathews oo loo magacaabay Safiirka UK ee Soomaaliya